मसला बेचेरै तीर्थयात्रा: कमाईको अधिकांस रकम तिर्थयात्रामै खर्च
काँकडभिट्टा, झापा । आर्थिक अभावका कारण धेरै व्यक्तिले चाहेर पनि इच्छाअनुसार तीर्थयात्रा गर्न सकेका छैनन् । मेचीनगरकी एक वृद्धा भने स्थानीय बजारमा घरेलु मसला बेचेर भएको आर्जनले विदेशसम्मका विभिन्न धार्मिकस्थलको दर्शन गर्दै आउनुभएको छ ।
परम्परागत रुपमा घरमै प्रयोग हुँदै आएको काठको ओखलमा मुसलले कुटेर उहाँ मसला बनाउनुहुन्छ । यसरी खुर्सानी, बेसार, जिरा तथा धनियाँको मिश्रित र अलग अलगसमेत मसला बनाएर राजवंशी स्थानीय धुलाबारी बजारमा दैनिक बिक्री गर्नुहुन्छ । “मेसिनमा भन्दा ओखलमा पिसेको मसला बढी स्वादिलो हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । घरमै पिसेको मसला बढी स्वादिलो हुने र अखाद्य पदार्थ मिसावट नहुने भएकाले स्थानीयवासी मसला किन्न आउने गरेका छन् । उहाँले बनाउने मसला बजारमा निकै लोकप्रिय छ ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, चैत २७, २०७४१४:१४
अवतरणकै बेला पोखरामा यतीको एयरलाईन्सको जहाजको विमानको पांग्रा ‘जाम’: विमानस्थल बन्द
केही समय अगाडी मात्रै ओभरटेक गर्ने क्रममा कार नदीमा खस्यो ! एकको मृत्यु , एक घाइते !
घोराहीमा हत्या गरिएका हार्डवेयर व्यवसायीका परिवारले शव बुझ्न मानेन !
अब छिट्टै भक्तपुर र काभ्रेको मुख्य नाकामा सुरुङमार्ग निर्माण हुने ! जापानले जनायो यस्तो सहमति !
तेजाप छर्कि धारिलो हतियार प्रहारबाट गम्भीर घाइते वसन्ती परियारको अवस्था खतरामुक्त